RASMI: Luka Modrić Oo Ku Guuleystay Abaal-marinta Halyeynimada Ee Marca Leyenda - GOOL24.NET
RASMI: Luka Modrić Oo Ku Guuleystay Abaal-marinta Halyeynimada Ee Marca Leyenda
Xiddiga khadka dhexe uga ciyaara Real Madrid ee Luka Modrić ayaa ku guuleystay abaal-marinta halyeynimada ee uu bixiyo wargeyska Marca ee loo yaqaano (Marca Leyenda), taas oo uu ku kasbaday wacdarihii uu garoomada ka dhigay intii uu ku jiray xirfadda kubadda cagta.
Luka Modrić ayaa xubin muhiim ah ka ahaa Real Madrid tobankii sannadood ee ugu dambeeyey, isaga oo ahaa halbowlaha khadka dhexe waqtiyadii ay koobabka ugu badan qaadday kooxdu qarnigan 21aad.
Tan iyo markii uu kaga soo biiray Tottenham sannadkii 2012, Luka Modrić ayaa Real Madrid kula guuleystay 19 koob oo kala ahaa: 4 Champions Leagues, 4 Club World Cups, 3 UEFA Super Cups, 3 Horyaalka LaLiga ah, 1 Copa del Rey, 4 Spanish Super Cup.
Waxa uu intii uu joogay Real Madrid uu ku guuleystay abaal-marinta ugu qaalisan ee ciyaartoygu si shaqsi ah ugu guuleysan karo oo ah abaal-marinta xiddiga adduunka ee Ballon d’Or oo sannadkii 2018 uu qaatay.
37 jirkan ayaa abaal-marinta Marca Leyenda waxa lagu guddoonsiiyey xaflad lagu qabtay magaalada Madric, waxaana hadal uu ka jeeidyey uu ku yidhi: “Waxa aan ku faraxsanahay jacaylka ay taageereyaashu isiiyeen ee ay maalin walba ii muujiyaan. Waxa aan isku dayaa in aan siiyo wax kasta oo karaankayga ah waqti karta oo aan xidho shaadhkan si aan ugu gudo jacaylka ay ii hayaan.
“Real Madrid waa hoygaygii, waxaanan ku dareemayaa farxad badan. Waxa aan ahay Madrisita kale, noloshayda oo dhanna waan ahaan doonaa.
“Waad ku mahadsan tihiin abaal-marintan; marka aad eegto dadkii kusoo guuleystay, sharaf weyn ayay ii tahay in aan ka mid noqdo xiddigihii wiilasha iyo gabdha lahaa ee kusoo guuleystay.”